अपि पावरको हकप्रद धमाधम बिक्रीमा, कहिलेसम्म दिने आवेदन ? - Arthasansar
अपि पावरको हकप्रद धमाधम बिक्रीमा, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
बुधबार, ०२ असार २०७८, १४ : ४२ मा प्रकाशित
अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले जेठ २० गते, बिहीबारबाट आफ्ना लगानीकर्तालाई धमाधम हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेकाे छ । उक्त हकप्रद सेयर भर्न अब केही दिन मात्र बाँकी रहेकाे छ ।
यस हकप्रदमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।